1 Samuel 23 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
23 Na wɔbɛka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Filistifo ne Keila+ reko, na wɔrefow awiporowbea hɔ aduan.”+ 2 Na Dawid bisaa+ Yehowa sɛ: “Menkɔ na minkokunkum Filistifo yi?” Na Yehowa buaa Dawid sɛ: “Kɔ, kokunkum Filistifo no na gye Keila.” 3 Ɛnna Dawid mmarima no ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, Yuda+ fã ha a yɛwɔ yi mpo, yesuro, na sɛ yɛkɔ Keila na yɛne Filistifo+ mpasua so dɔm kɔko de a, ɛnde yennim nea ebesi!” 4 Enti Dawid san bisaa Yehowa.+ Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɔre, sian kɔ Keila, efisɛ mede Filistifo no bɛhyɛ wo nsa.”+ 5 Enti Dawid ne ne mmarima no kɔɔ Keila ne Filistifo kɔkoe, na wɔfaa wɔn nyɛmmoa kɔe, na wɔde okunkɛse kunkum wɔn; enti Dawid gyee Keilafo.+ 6 Bere a Ahimelek ba Abiatar+ reguan akɔ Dawid nkyɛn wɔ Keila no, ɔde asɔfotade+ kuraa ne nsam kɔe. 7 Na wɔkɔbɔɔ Saul amanneɛ sɛ: “Dawid aba Keila.”+ Na Saul kae sɛ: “Onyankopɔn atɔn no ahyɛ me nsa;+ wato ne ho mu, efisɛ ɔkɔ kurow a apon ne mmeamu deda ano mu.” 8 Enti Saul frɛfrɛɛ ɔman no nyinaa sɛ wɔnkɔko na wonsian nkɔ Keila na wonkotwa Dawid ne ne mmarima no ho nhyia. 9 Na Dawid tee sɛ Saul rebɔ ne ho pɔw bɔne.+ Enti ɔka kyerɛɛ ɔsɔfo Abiatar sɛ: “Fa asɔfotade no bra ha.”+ 10 Ɛnna Dawid kae sɛ: “O Yehowa, Israel Nyankopɔn,+ w’akoa ate sɛ me nti, Saul pɛ sɛ ɔba Keila bɛsɛe kurow yi.+ 11 Keilafo de me bɛhyɛ ne nsa anaa? Saul besian aba ha ampa sɛnea w’akoa ate no? O Yehowa, Israel Nyankopɔn, mesrɛ wo, ka kyerɛ w’akoa.” Ɛnna Yehowa kae sɛ: “Obesian aba.”+ 12 Na Dawid kae sɛ: “Keilafo de me ne me mmarima no bɛhyɛ Saul nsa anaa?” Ɛnna Yehowa buae sɛ: “Wɔde mo bɛhyɛ ne nsa.”+ 13 Ntɛm ara na Dawid ne ne mmarima bɛyɛ ahansia+ no sɔree, na wofii Keila nantew kɔɔ baabiara a wobenya. Ɛnna nkurɔfo kɔbɔɔ Saul amanneɛ sɛ Dawid aguan afi Keila kɔ, enti wannya ankɔ hɔ. 14 Na Dawid kɔtenaa sare so mmeae a ɛhɔ kɔ yɛ den, na ɔtenaa Sif+ sare so mmepɔw mu. Saul hwehwɛɛ no daa,+ nanso Onyankopɔn anyi no anhyɛ ne nsa.+ 15 Na Dawid suroe daa efisɛ Saul fii adi kɔhwehwɛɛ ne kra bere a Dawid wɔ Sif sare so wɔ Hores+ no. 16 Ɛnna Saul ba Yonatan sɔree, na ɔkɔɔ Dawid nkyɛn wɔ Hores kɔhyɛɛ ne nsam den+ Onyankopɔn din mu.+ 17 Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nsuro,+ efisɛ me papa Saul nsa renka wo, na wo na wubedi Israel so hene,+ na mɛyɛ w’abadiakyiri; me papa Saul mpo nim saa.”+ 18 Na wɔn baanu no yɛɛ apam+ Yehowa anim, na Dawid kɔɔ so tenaa Hores, na Yonatan de, ɔkɔɔ ne fie. 19 Akyiri yi, Sif+ mmarima foro kɔɔ Saul nkyɛn wɔ Gibea+ kɔkae sɛ: “Ɛnyɛ beae a ɛhɔ kɔ yɛ den wɔ Hores,+ yɛn nkyɛn ha yi ara na Dawid abehintaw+ wɔ Hakila koko+ a ɛwɔ Yesimon nifa fam+ no so? 20 Enti ɔhene, sɛnea wo kra pɛ yiye+ sɛ wusian ba no, sian bra, na yɛn nso yebeyi no ahyɛ ɔhene nsa.”+ 21 Ɛnna Saul kae sɛ: “Yehowa nhyira mo,+ efisɛ moahu me mmɔbɔ. 22 Mesrɛ mo, monkɔ so nhwehwɛ no na munkohu faako a ne nan akodu ne onii ko a ohuu no no, efisɛ mate sɛ ɔyɛ onitefo+ paa. 23 Monhwɛ na munhu hintabea biara a wakɔhyɛ, na momfa ɛho adanse mmrɛ me, na me ne mo bɛkɔ. Na sɛ ɛba sɛ ɔwɔ asase no so a, mekyin ahwehwɛ no Yuda mpempem nyinaa mu.”+ 24 Enti wɔsɔre dii Saul anim kɔɔ Sif.+ Saa bere no na Dawid ne ne mmarima no wɔ Maon+ sare so, wɔ Araba,+ Yesimon anafo fam. 25 Akyiri yi, Saul ne ne mmarima no bae bɛhwehwɛɛ no.+ Bere a wɔka kyerɛɛ Dawid no, ɛhɔ ara na osian kɔhyɛɛ ɔbotan+ mu, na ɔtenaa Maon sare so hɔ. Na Saul tee no, otiw+ Dawid wɔ Maon sare no so. 26 Eduu baabi no, na Saul wɔ bepɔw no fã ha, na Dawid ne ne mmarima no nso wɔ bepɔw no fã ha. Na Saul nti, na Dawid repɛ ntɛm afi hɔ.+ Saa bere no nyinaa, na Saul ne ne mmarima no rebɛn Dawid ne ne mmarima no apɛ wɔn akyere wɔn.+ 27 Nanso ɔbɔfo baa Saul nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛ ntɛm kɔ, na Filistifo abɛtow ahyɛ asase no so!” 28 Enti Saul gyaee Dawid akyidi,+ na okohyiaa Filistifo no. Ɛno nti na wɔbɛfrɛɛ hɔ Ntetewmu Botan no. 29 Ɛnna Dawid guan fii hɔ, na ɔkɔtenaa mmeae a ɛhɔ kɔ yɛ den wɔ En-Gedi. +